Igwe mmiri nke Asia na-agbaze n'ihi mgbanwe ihu igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Osisi glaasi nke Asia na-agbaze n'ihi mgbanwe ihu igwe
Ndị ọkà mmụta sayensị tinyere njedebe nke mmụba nke okpomọkụ zuru ụwa ọnụ na 2 Celsius C. Gịnị kpatara ọnọdụ okpomọkụ ahụ? Nnyocha dị iche iche na-egosi na site na okpomoku a nke okpomoku zuru ụwa ọnụ, mgbanwe nke okike na mgbasa ikuku nke ụwa, mgbanwe ndị e mepụtara agaghị abụ nke a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na nke a na-apụghị ịkọwa akọwa n'oge.
Maka nke a, ịnọ n'okpuru 1,5 ºC nke okpomoku ụwa bụ otu n'ime ebumnuche nke nkwekọrịta Paris na ndị mba 195 kwenyere ịtụle dịka njedebe maka njedebe nke narị afọ. Otú ọ dị, 65% nke mkpokọta oke ugwu dị n'Esia nwere ike funahụ ọ bụrụ na anwuru ọkụ gas na-aga n'ihu otu a. Ndi ice nke glaasi nke Asia na-agbaze?
1 Ọmụmụ glacier Asia
2 Nyocha mmetụta na nsonaazụ
3 Mmetụta nke ọnwụ glacier
Ọmụmụ glacier Asia
Nnyocha, nke Mahadum Utrecht (Holland) duziri, na-atụ aro na ihe ruru 65% nke oke ugwu glaciers dị na Eshia nwere ike ịla n'iyi n'ọnọdụ dị elu nke na-aga n'ihu na -emepụta ikuku gas.
Ọ bụrụ na anwuru ga-aga n'ihu na ọsọ ọsọ na njọ na ha na-eme taa, kọntinent Eshia ga-eche nnukwu mfu ice nke ahụ ga-agbagha usoro okike dị iche iche wee weta nsonaazụ dị egwu maka mpaghara ndị na-adịghị ebi na ya. Ma mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, ala ubi na mmiri ọkụ hydroelectric ga-eyi egwu site na mbelata nke oke glaciers ndị a.
Na mpaghara ebe agbaze mmiri si na glaciers dị mkpa maka mmiri iyi na ndụ nke ahịhịa na ụmụ anụmanụ ndị metụtara ha. Nrigbu nke mmiri maka mmiri nke ihe ubi na ubi osikapa na-enye mmiri site na glaciers nwere ike belata site na otu nke efu.
Na okpomọkụ na-ekpo ọkụ n'ihi ikuku gas na-eme na China, ebe ọ bụ na 60% nke ngwakọta ike na-adabere na icheku ọkụ, ọdịda dị n'ụdị snow na-eme ka ogo ha pere mpe ma glaciers na-efunahụ oke na olu.
Mbelata mmiri mmiri nwere ike ibute nsogbu metụtara nri na imepụta ike, nke nwere ike ịnwe ụdị ọghọm dị iche iche.
Nyocha mmetụta na nsonaazụ
Iji chọpụta mmetụta nke ọnwụ glaciers ndị a ga-eweta na mmiri, ọrụ ugbo, na ọdọ mmiri, ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na nyocha a bipụtara na akwụkwọ akụkọ Nature jiri ọtụtụ ụzọ mmiri ozuzo na data okpomọkụ sitere na ihu igwe dị ugbu a. N'otu aka ahụ, ha dabere na data satịlaịtị, amụma ihu igwe maka mgbanwe na mmiri ozuzo na okpomọkụ ruo 2100, ma jikwa nsonaazụ nke ọrụ ubi ha nke emere na Nepal na ụgbọ elu ikuku na-enweghị atụ.
Mkpebi nke ihe omumu a nyere dika onodu ubochi nke ihu igwe bu nke bu amuma, obuna maka onodu di nma nke Nkwekorita Paris mezuru ma onodu oku nke mbara ala adighi ari elu 1,5 Celsius C, ga-efu. 35% nke nnukwu glaciers site na afọ 2100.
Site na ọnọdụ okpomọkụ a na-eme atụmatụ gburugburu 3,5 Celsius C, 4 Celsius C, na 6 Celsius C, a ga-enwe nnukwu mfu nke ihe dịka 49%, 51%, na 65%, n'otu n'otu.
Mmetụta nke ọnwụ glacier
O siri ike ịchọpụta mmetụta ọnwụ ice ga-enwe na ihu igwe ụwa. Ihe doro anya bụ na mmetụta ndị ọ ga-enwe ga-abụ ihe na-adịghị mma. Iji nọgide na-amata nsonaazụ nke ezumike nke glaciers ndị a, a chọrọ ọmụmụ ihe mmetụta sara mbara nke na-akọwa usoro anụ ahụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na iji data sitere n'ọtụtụ isi, gụnyere nsonaazụ nke ọmụmụ a.
Ka ị na-abịaru nso ebe glacier dị, ọ dị mkpa Ọ bụ mmiri nke njikọta maka ọrụ dị iche iche nke mmadụ. Ọ bụ ezie na n’akụkụ ụfọdụ, onyinye nke mmiri mmiri kpụkọrọ akpụkọ n’osimiri dị ukwuu karịa nke ndị ọzọ, akụkụ ebe ọdịda anyanwụ nke mmiri ahụ karị, dị ka Osimiri Osimiri Indus, dabeere n’ụzọ na-adịghị agbanwe agbanwe nke mmiri gbazee sitere na mmiri kpụkọrọ akpụkọ. .
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Osisi glaasi nke Asia na-agbaze n'ihi mgbanwe ihu igwe
Puerto Rico na Virgin Islands, bibiri kpamkpam mgbe oke ifufe Maria gasịrị
Gịnị mere ọkụ ji agbapụta na mgbawa ugwu?